EU oo u digtay TFG - BBC News Somali
EU oo u digtay TFG
24 Nofembar 2010
Image caption Baarlamaanka Soomaaliya
Dalalka xubnaha ka ah Soomaaliya ayaa danjirayaashooda u qaabbilsan Soomaaliya ayaa sheegay sida ay uga xun yihiin kulanka baarlamaanka Soomaaliya ee qabyada ah oo dhacay 22kii bishan November.
Waxaa kale oodanjirayaashu sheegeen in ay ka xun yihiin dhacdooyinka culus iyo hab dhaqanka xubno ka tirsan baarlamaanka oo laga tira badan yahay ay halkaa ka sameeyeen.
Midowga Yurub wuxuu si aan mugdi ku jirin ugu baaqayaa Hey'adaha Federaalka ee Soomaaliya in ay soo af jaraan istijaabinta siyaasadeed iyo muranka dhaawacay rajadii laga qabay kala guur lagu guuleysto.
Wakiillada Dowladaha Yurub waxay xusuusisay Hoggaanka iyo Hey'adaha Federaalka iyo weliba xubnaha baarlamaanka, in ay si wadajir ah ay mas'uul uga yihiin xilliga ku meel gaarka ah.
Iyada oo in ka yar 10 bilood ay ka hartay xilliga ku meel gaarku uu ku dhammaanayo, hey'adaha Federaalku waxay u baahan yihiin, ayay Yurub tiri, in ay si deg deg ah u waajahaan hawlaha ugu muhiimsan ee horyaalla, kuwaas oo ah, soo celinta nabadgelyada, socodsiinta hawlaha dib u heshiinta iyo hawlaha muhiimka ah ee ku meel gaarka, oo uu ka mid yahay hannaanka Dastuurku.
Danjirayaasha Midowga Yurub, waxay sheegeen in iyaga oo wakiil ka ah deeq bixiyayaal muhiim u ah Soomaaliya, in ay xusuusinayaan Hey'adaha Federaalka in kaalmada Midowga Yurub ay siineyso hey'adaha Federaalka Soomaaliya ay si weyn ugu xiran tahay waxa laga qabto hawlahaas loo cayimay.
Madaxda Soomaaliya Ma aha markii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliya la xasuusiyo amaba loo meeriyo waxyaabaha ay tahay in ay qabato.
Laakiin markan arrintu waxay si gooni ah ugu qalloocan tahay labada mas'uul ee u sarreeya dalka.
Madaxweyne Shariif Shiikh Axmed, waxaa New York iyo Madrid labadaba loogu sheegay in uu soo afjaro khilaafka u dhexeeya madaxda sare.
In la soo dhiso dowlad. Iyo soo bandhigto waxyaabaha ay qabaneyso xilliga kooban ee ka haray ku meel gaarka.
Taasi weli ma suurta gelin. Inkasta oo dowlad la dhisay baarlamaankii ma ansixin. Khilaafkii Madaxduna wuxuu ku xiran yahay hadba cidda aad weydiiso in uu dhammaaday iyo in kale.
Xataa shirkii Madaxda IGAD ay isugu timid, Soomaaliya waxaa matalayay xubin baarlamaanka ka tirsan oo hore Wasiir u ahaan jiray, maaddaama Madaxaweynihii iyo Ra'iisal Wasaarihiiba ay ku mashquulsan yihiin khilaafka.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Shariif Xasan Shiikh Adan, waxaa u suurta geli la' in uu maamulo baarlamaankii uu mas'uulka ka yahay.
Waxaa dhacday in laga bannaday in uu cod u qaado Xukuumadda.
Waa dhab in lagu murmay in codku qarsoodi yahay iyo in uu yahay gacan taag.
Laakiin ma ahan taas macnaheedu in la baajiyo codkii loo qaadi lahaa Xuakuumadda cusub.
Sidee baarlamaanku u shaqeyn kari doonaa, haddii marba kooxda laga tiro badan yahay ay diiddo in cod la qaado
Image caption 135 isku dayay in ay u qaxaan Yemen. 11 keliya ayaa ka badbaaday.
su'aashu waxay noqoneysaa sidee baarlamaanku u shaqeyn doonaa?
Qarsoodi iyo Gacan taag Codka qarsoodigu wuxuu saamaxayaa in mudane kastaa uu sida ay isaga la tahay codka u bixiyo, isaga oo aan ka baqeyn muran iyo su'aalo ka daba yimaada sida uu u codeeyay.
Haddii ay noqoto gacan taag, waxaa jiraya dhowr arrimood.
Dadka qaar waxay ka baqayaan hanjabaad iyo caga jugleyn.
Qaar kale waa kuwa doonaya in ay laba wajiileeyaan oo waxa ay afka ka sheegayaan iyo sida ay codeynayaan ay kala duwanaan lahaayeen.
Kuwa kalena waa qaar laga yaabo in ay laaluush iyo daneysi kale oo shakhsi ah ka baqaya in arrintani ay ka hor istaagto.